Torkia - firenena eo amin'ny fihaonan'ireo kaontinanta roa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Any Torkia no misy ny Tendrombohitra Ararat, hoy ny Baiboly, dia milevina i Noa.
Eto no misy ny niandohan'ny Tigra sy Eofrata, izay nihanitombo ny sivilizasiôna tany Mesopotamia taloha.
Torkia - fampahalalana fototra
Vola: Lira Tiorka (TRY)
Any Torkia ankehitriny dia misy an'i Troy, tanàna voalaza ao amin'ny Homer Iliad. Teo no niavian'ilay Helena Trojan malaza. Ankoatr'izay, i Homer dia toa avy any Antalya, toa an'i Midas, mpanjaka angano na i Herodotus, mpahay tantara.
Ny toerana misy azy eo amin'ny sampanan-dalan'i Eropa sy i Azia dia nametraka an'i Torkia amin'ny toerana ara-jeopolitika manankarena nandritra ny taonjato maro. I Torkia izao dia mitana andraikitra lehibe hatrany amin'ny Moyen Orient.
Toetrandro any Tiorkia
Ao Tiorkia faritry ny toetrandro an-dranomasina subtropika amoron-tsiraka sy kontinanta subtropika mankany afovoan-tany. Ny faritra amoron-tsiraka atsimo sy andrefana dia misy fiantraikany amin'ny toetr'andro ambanin'ny tany amin'ny fahasamihafana mediteraneana. Any amin'ny morontsiraka avaratr'i Torkia dia misy toetr'andro any amin'ny Ranomasina Mainty izay malefaka kokoa noho ny any subtropika.
Rahoviana no handeha hiala sasatra any Torkia?
Ny fotoana mety indrindra handehanana mankany amin'ny Ranomasina Mediterane sy ny Ranomasina Aegean dia ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Ny mari-pana dia tsy midina ambanin'ny 25 degre. Ny tsara indrindra dia ny mankany amin'ny Ranomasina Mainty amin'ny Jona - Septambra.
Ny lohataona sy ny fararano dia mafana sy main-tany any Torkia, izay fotoana mety amin'ny hetsika ivelany sy fitsangatsanganana.
Inona no manaitra ary aiza no haleha any Torkia?
I Istanbul dia tanàna iray misy ny fihaonan'ireo kaontinanta roa sy sivilizasiona roa, Eoropeana sy Afovoany Atsinanana. Eoropa sy Azia dia ampifandraisin'ny Bridge Bridge Bosphorus.
Istanbul no renivohitry ny fanjakana lehibe telo: Roman, Byzantine ary Ottoman.
Azonao atao ny mankafy ny sisa tavela amin'ny lapan'ny Grika sy Romanina ary iray amin'ireo moske tsara indrindra eto an-tany, ny Moskea Manga miaraka amina minareta enina mampiavaka azy.
Eo ihany koa ny katedraly Byzance sy ireo fiangonana miavaka toa an'i Hagia Sophia, izay teo amin'ny tantarany dia fiangonana orthodoksa, moske silamo, katedraly grika Constantinopel, ary katedraly katolika romana. Ankehitriny, tranombakoka ny Hagia Sophia.
Rehefa any Torkia ianao dia afaka misafidy amin'ny ranomasina efatra: Mainty, Aegean, Marmara na Mediteraneana. Ny malaza indrindra amin'ireo mpizahatany dia ny Aegean sy ny Mediteraneanina, izay antsoina miaraka amin'ny hoe Riviera Tiorka.
Mendrika mankany Cappadocia, toerana mahafinaritra amin'ny volana fairytale mahafinaritra noforonin'ireo volkano volkano. Nandritra ny taonjato maro, ny trano, ny fiangonana ary ny lapa dia sokitra tamin'ny tuffs, izay azonao atao izao mandraka androany. Azonao atao ny mizaha an'i Cappadocia an-tongotra na bisikileta, ary mankafy ireo vatolampy mahatalanjona avy amin'ny rivotra miaraka amina gondola balaonina rivotra mafana.
Raharaha tsy mahandro sakafo
Ny lovia tiorka malaza indrindra eto an-tany dia ny shashlik. Ilaina ny mahafantatra fa any Torkia ny teny "shashlik" dia manondro lovia hena maro samy hafa be. Ny Kebab dia mety hidika tsy ny hena namboarina na ny cutlets lava lava namboarina avy tamin'ny hena voasiaka, fa koa ny kaserôla na lasopy matevina.
Fanampin'ireo hena na legioma lovia dia matetika ny vary, matetika miaraka amin'ny zava-manitra sy legioma, na bubur kely Bulgur.
Ho an'ny fisotroana, dite mahery sy mamy dia aroso miaraka amin'ny mint sy zava-manitra, raha Aryan kosa dia karazana fisotro misy ronono masira.
Fandrahonana sy olana any Torkia
Tena tia mpizahatany ny Tiorka ary i Turkey dia heverina ho firenena azo antoka. Misy tranga halatra sy fikasana hamitahana mpizahatany, saingy ampy ny fitandremana mahazatra.
Tsiahivina fa nifanandrina tamin'ny Kiorda i Torkia. Tamin'ny fahavaratry ny 2012, ankoatry ny zavatra hafa, noho ny toe-javatra tany Syria, niha-mafy ny fifanolanana, ary nisy ny fanafihana sy fipoahana nataon'ny mpampihorohoro tao amin'ny tanànan'ny Gazantiep ao amin'ny faritanin'i Hakkari.
Firenena laika i Torkia, fa ny Tiorka, amin'ny maha silamo azy, dia afaka mandray anjara amin'ny korontana manohitra ny tandrefana, ary koa ny mponina any amin'ny firenena silamo hafa, ka alohan'ny handaozana azy dia tsara ny manamarina raha mampitandrina anao ny minisiteran'ny raharaham-bahiny alohan'ny hiainganao any tiorka na faritra manokana amin'ny fotoana iray.
Torkia, fitsaharana amin'ny volana oktobra: hevitra
Toerana snorkeling tsara indrindra
Torkia - Istanbul: famaritana ankapobeny ny tanàna
Cote d'Azur, Torkia, Egypt
Sipra, Limassol: hevitra
Posted in fitetezana sy fizahan-tany
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,553.